XOG:-: Xafiisyada dowladda Muqdisho oo qarka u saaran inay xirmaan hal sabab aawgeed..!! | Voice Of Somalia
Waxaa hoos u dhac ku yimid tirada shaqaalaha DFS ee ka howlgala guud ahaan Xafiisyada Dowlada kadib markii la sheegay in shaqaalaha qaar ay mushaar la’aan aawgii shaqada uga tageen.
Sababta ugu wey oo ay shaqaalaha uga tagayaan shaqooyinkooda ayaa la sheegay inay tahay mid salka ku heysa mushaar la’aan, iyadoo ay intaa xogta kusii dareyso in guud ahaan shaqaalaha Dowlada aan mushaar lasiin Afar Bil.
Mustaf Cali Nur oo kamid ah shaqaalaha mid kamid ah Wasaaradaha Dowlada, ayaa sheegay in xuquuqdiisa ay ka maqan tahay muddo Afar bil ah, isaga oo intaa ku daray inay la’ yihiin mas’uul ka jaahil bixiya sababta aan mushaarka loo siin.
Mustaf waxa uu intaa raaciyay in mushaarkooda ay awoodo inay bixiso DFS, balse ay madaxdu ka faa’iideysanayaan wakhtiga yar ee u harsan.
Mustaf waxa uu ballanqaaday in haddii uusan bishaani helin xuquuqdiisa uu gudbin doono warqad shaqo ka tagis ah, si nolol maalmeedkiisa uu uga raadsado meelo kale. Saalac Cusmaan oo kamid ah Ciidamada NISA, ayaa sheegay inuusan mushaar qaadan dhowr bil, islamarkaana uu yahay xaasle iyo caruurle, waxa uuna is weydiiyay su’aal ah halka dhaqaalaha ay bixiyaan reer galbeedka loo weeciyo.
Inkabadan Shan dowladood ayaa si joogta ah bil waliba DFS u siiso dhaqaale loogu tallo galay in lagu maareeyo shaqaalaha Dowlada, hayeeshee dhaqaalahaasi ay ku dhaca akoono shaqsiyaad.
Caasimada Online Xafiiska Muqdisho